तलबभत्ता नलिने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठको घोषणा सुनुवाइ आज : माओवादी छाडेका नेताहरुको सांसद पद पुनर्बहाली होला ? विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो जुम्ला सत्तारूढ कार्यदलको बैठकमा नेपाल पक्ष अनुपस्थित सम्पादकिय : रविन्द्र मिश्रले जनतासामु माफी माग्ने कि, हत्कडी लगाउने ? पार्टीका तर्फबाट मन्त्री हुनेको नाम टुंग्याउने माओवादी केन्द्रको तयारी भर्खरै प्रकाशित SHOW BREAKING NEWS
घटनामा संलग्‍न नगर सदस्य बिष्टसहितलाई अनुशासनको कारबाही गरिने
धनगढी । नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय टीकापुरमा तोडफोड भएको छ ।
कांग्रेस टीकापुरको नगर कार्यसमितिको बैठक चलिरहेका बेला शनिबार एक समूहले निर्णय पुस्तिका च्यातेर कार्यालयमै तोडफोड गरेको हो ।
कांग्रेस टीकापुर नगर समितिले घटनामा संलग्‍न नगर समिति सदस्यसमेत रहेका अँगत बिष्टलगायतलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने जनाएको छ । नगर समिति सभापति धनराज उपाध्यायले विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनामा संलग्‍न नगर सदस्य बिष्टसहितलाई अनुशासनको कारबाही गरिने बताए ।
तलबभत्ता नलिने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठको घोषणा...
सुनुवाइ आज : माओवादी छाडेका नेताहरुको सांसद पद...
विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो जुम्ला...
सत्तारूढ कार्यदलको बैठकमा नेपाल पक्ष अनुपस्थित...
सम्पादकिय : रविन्द्र मिश्रले जनतासामु माफी माग्ने कि, हत्कडी लगाउने...
पार्टीका तर्फबाट मन्त्री हुनेको नाम टुंग्याउने माओवादी केन्द्रको तयारी...
छिन्नमस्ताको चाँदीको मुकुटसहित एक पक्राउ...
तौल बढाउने सजिलो उपाए...
सुनुवाइ आज : माओवादी छाडेका नेताहरुको सांसद पद पुनर्बहाली होला ?
सत्तारूढ कार्यदलको बैठकमा नेपाल पक्ष अनुपस्थित
सम्पादकिय : रविन्द्र मिश्रले जनतासामु माफी माग्ने कि, हत्कडी लगाउने ?
पार्टीका तर्फबाट मन्त्री हुनेको नाम टुंग्याउने माओवादी केन्द्रको तयारी
छिन्नमस्ताको चाँदीको मुकुटसहित एक पक्राउ
तौल बढाउने सजिलो उपाए
‘टोपबहादुरको टोली घर न घाट’